Inguva yekudyara mumisika irikubuda? | Ehupfumi Zvemari
Ehezve, kune marudzi mazhinji ekudyara, asi imwe yeanonyanya kushungurudza iri kubuda. Hazvishamisi kuti vane upside zvinogona yakakosha uye zvirokwazvo pamusoro peizvo misika yechinyakare inopa. Kubva pane ino maonero, pane mari yakawanda yaunogona kuwana. Asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana, zvichikusiira nhaka yakawanda munzira. Ingozi yekuti unoshaya zvekuita kunze kwekutora kana uchinyatsoda kutora chinzvimbo mumisika yemari yakanyanya.
Kuti iwe unyatso kujekeserwa nezverudzi urwu rwemari, hapana chinhu chiri nani kunze kwekuziva izvo zviri kubuda izvi. Zvakanaka, idzi nyika dzine kukurumidza kukurumidza yebasa rayo rehupfumi iro rinoenderana, kwete chete nekukura kwemukati menyika pachayo. Kana zvisiri, zvakare nekuwedzera kwakakosha muhukama hwekutengeserana nenyika dzechitatu. Muchidimbu, kukura kwayo kugona kwakanyanya kwazvo.
Iwo misika yemasheya yenyika idzi ine kuita kuri nani munguva dzakapamhama dzehupfumi hwenyika dzese, ne kukwira kwakamira chaizvo mumitemo yavo. Kunyangwe pane zvinopesana, ivo vanotambura zvakanyanya kudonha mumaitiro akawandisa. Icho chiri chikonzero ichi kuti misika yemasheya yenyika dzichiri kusimukira dzinofamba kuburikidza nemaitiro ehupfumi. Icho chinhu chaunofanirwa kuongorora kana uchizotora zvinzvimbo kubva ikozvino zvichienda mberi. Nekuti pasina mubvunzo uchamhanya nenjodzi kupfuura mumimwe misika yequity.
1 Ndeapi nyika dziri kubuda?
2 Hunhu hwemisika iyi
3 Nzira yekuderedza njodzi?
4 India: imwe yeanonyanya kukurudzira
5 Misika iyi inounza chii kwauri?
6 Seimwe nzira yekudyara
Ndeapi nyika dziri kubuda?
Chekutanga pane zvese, iwe unozofanirwa kuziva kuti ndivanaani vari vamiririri veaya akasarudzika hupfumi. Zvakanaka, zvakanyanyisa iyo BRICS. Ndivanaani? Huye, ndiwo mazita anomiririra hupfumi hwakakosha hweboka iri: Brazil, Russia, India, China neSouth Africa. Asi havazi ivo chete vari kubuda kwaunogona kuisa mari kubva ikozvino. Kana zvisiri, mimwe misika isingazivikanwe yemari yemari zvakare. Semuenzaniso, maTurkey, Mexico uye kunyangwe ese madhiraoni eAsia. Ndokunge, iwe une yakawanda yekupi kupi kwaunosarudza yako inotevera inivhesitimendi. Zvakawanda kupfuura iwe zvaunofunga pakutanga.
Mune mazhinji acho, kukura kwekutarisira kwakanyanya kwazvo. Kusvika padanho rekuti ivo vanokwanisa kuburitsa kuwedzera mumabhegi avo akasiyana pamusoro pe10% gore rega. Kunyangwe zvakanyanya muzviitiko zvinonyanya kunakira zvaunofarira. Mupfungwa iyi, imwe yemisika yemari inosimudzira mumakore apfuura ndeye iyo India. Nedzidzo dzegore rega dzinosvika maviri manhamba. Asi iwe unofanirwa kuremekedza zviratidzo zvavo zvekushaya simba kuti vasiye nzvimbo. Nekuti njodzi dzakakoshawo muzviitiko izvi.
Hunhu hwemisika iyi
Iyi misika yemari yakakosha uye hadzina kuitirwa zvese zvinyorwa yevatengesi. Kwete pasina, iwe unofanirwa kuziva mashandiro nemaitiro ako uye neako maitiro. Nekuti chero kusarongeka kunogona kukutorera maeuro akawanda anozodzika nemugwagwa. Kana iwe uri mushandisi uine ruzivo rwushoma mukutengesa masheya, zvingave zvirinani kurega kubva kune chero mhando yekutengesa mumisika irikubuda. Kwete kunyangwe kuburikidza nemari yekudyara. Njodzi dzakanyanya kukwirira kuti iwe utyore mari yako kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, gwaro richangoburwa nekambani inotungamira kubvunza zvemari inoratidza zvimwe zvehunhu hwakakosha hwemisika iri kubuda. Chimwe chinonyanya kuzivikanwa ndeyekusagadzikana kwayo kwakakwirira, pamusoro pedzimwe nzvimbo dzenzvimbo. Uye zvakare, inofanirwawo kutarisirwa kuti nyika idzi dziri mu chinja chinja. Izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kwazvo kuongorora mamiriro chaiwo emisika iyi. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei kuchinjika mumutengo wako kuri kugara uye kuchikonzera imwe mamiriro ekusagadzikana. Iko iwe kwausingazive kana zvichidikanwa kutengesa iwo masheya kana pane zvinopesana chengetedza nzvimbo dzakavhurika.
Nzira yekuderedza njodzi?
Chero nzira, iwe une akateedzana emazano ekudzora njodzi dzekushanda mumisika iyi yakakosha. Mumwe wavo anozvishongedza kuburikidza ETFs o yakanyorwa mari. Icho chigadzirwa chemari chiri musanganiswa pakati pemari inowirirana nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya. Iko inokutendera iwe kuti ushandise zvirinani kudyara kunyangwe njodzi iriko nguva dziripo. Kune akawanda ezvigadzirwa izvi anonyatsoteedzera ari kubuda misika index. Asi nemukana wakakura uyo unopa mamwe makomisheni anonakidza ehupfumi hwepamba.
Imwe yemhando dzekudyara dzinogona kuve dzinonakidza kuvhura nzvimbo mumisika iyi ndeyekudyidzana mari. Une simba rinopihwa nemaneja. Iko kunosanganisirwa misika inosimuka, zvinoenderana nezvako zvaunofarira. Mune ino kesi, mukana wayo mukuru ndewekuti ndeyekudyara iyo inogona kusiyaniswa nedzimwe nhumbi dzemari. Kwete chete kubva kuequity, asiwo kubva kune yakamisirwa mari kana kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru. Mari idzi dzinoitirwa nguva dzekusingaperi mune yepakati nepakati yakareba.
India: imwe yeanonyanya kukurudzira
Pakati pemisika iyi yese, iyo yeIndia inomira kunze. Iyo inochengetedza isina mwero uptrend iyo yaita nhamba yakanaka yevashambadzi vadiki nepakati vanowana mari yakawanda. Nekudaro, ine imwezve njodzi uye kuti iwe unofanirwa kufunga nezve kana uchizovhura zvinzvimbo panguva ino. Nekuda kwekukwidziridzwa kwepamusoro kwayakaita mumakore matatu apfuura, hazvingashamise kana paine chakasimba kururamisa mumitengo yavo pamusoro pemwedzi mishoma inotevera. Kusvika padanho rekuomesesa zvakanyanya mari dzako.
Imwe yemaitiro ekupinda muAsia iri kubuda misika iri kuburikidza nemari yekudyara. Iwo anoshanda kwazvo kuzadzisa zvinangwa zvako, pasina chikonzero chekuti iwe uve nekuziva hunhu hwakanyorwa mune yavo hombe misika yemasheya indices. Vazhinji uye vazhinji mamaneja vatendeudzira maziso avo kuenda kunzvimbo ino nenzvimbo nekuonekwa kwe mari itsva yekudyara. Uye neiyi nzira, iwe unogona kusangana neiyi nyowani yekuda iyo yako yekudyara nhoroondo inopa. Chero zvazvingaitika, India ndeimwe yenyika dzichiri kusimukira dzausingakwanise kukanganwa kubva zvino zvichienda mberi.
Misika iyi inounza chii kwauri?
Ehezve, kune mamwe mabhenefiti ayo makambani ari kubuda anokupa iwe. Nekuti haugone kukanganwa munguva pfupi kuti iwo akasiyana misika. Uye ivo havana kana kutevedzera zvinoitika zvemisika yemasheya yenyika dzakasimukira. Kuita kuti zvive nyore kwauri kuti utengese kuchengetedzeka kwechikamu chakakosha cheiyi, hapana chinhu chiri nani pane kutarisa zvimwe zvezviratidzo zvakakosha.
Haasi ese misika ari kubuda akafanana, kure nazvo. Kuisa mari muzvikwereti muSouth Korea hakuna kufanana neMexico. Iyo kusiyana mune zvayakaronga ndeimwe yemamwe madhinominesheni emisika iyi. Iwe haugone kuzviisa dzese mudhirowa rimwe nekuti unozokanganisa zvakakomba zvaunozozvidemba mushure memazuva mashoma.
Ivhareji kukura kwemisika iyi pamusoro pegore rapfuura zvave zvichinyanya kugutsa kupfuura mumisika yakabudirira. Nemaitiro ari pakati pemashanu negumi muzana mapoinzi pamusoro peaya. Nenzira iyi, iyo purofiti ichave yakanyanya kuwanda mukutsinhana uku.
Icho chikamu chekudyara icho haugone kugovera kune yepakati nepakati yakareba. Chaizvoizvo nekuda kwekushanduka kwayo, inogona kuchinja zvakanyanya chero nguva. Uye nenzira iyi, unogona kukosheswa pamitengo yakasarudzwa. Ndiyo imwezve njodzi yekuti iwe unomhanya nerudzi urwu rwekushanda mumisika yemari.
Ihwo hupfumi hune zvakawanda kukura kugona. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nekuti ivo vanowanzo tenderera kune mashandiro evashambadzi vadiki nepakati. Hazvishamisi kuti vanogona kuita zvinofambisa kufamba kwavo mumusika wemasheya zvakanyanya kusimba kupfuura mumisika yakagadzirwa.
Mimwe misika irikubuda yakave inobatsira zvikuru kwemakore akati wandei. Semuenzaniso, Southeast Asia madragoni izvo zvakagadzira kudzoka mumitengo yavo pamusoro pevhareji yepasi rose. Kunyangwe paine makomisheni akawandisa kupfuura mumisika yenyika, iine zvakapetwa kaviri mune ino pfungwa.
Seimwe nzira yekudyara
Iwe unofanirwa kuona iyi misika yemari seimwe bhizimisi mukana izvo zvinounzwa kwauri kuti uvandudze yako yekutarisa account balance. Neichi chikonzero iwe haufanire kushungurudza mashandiro. Kana zvisiri, nekusiyana, zviite mushe kana mamiriro akakodzera asangana kuti apinde munzvimbo dzawo. Vachave vashoma pagore kana pamwe pane zviitwa zvavasina kukurudzirwa. Iwe unofanirwa kuve wakatarisira kutaridzika kwavo, saka unenge usina imwe mhinduro kunze kwekunyatsoongorora yavo misika.
Kubva pane ino mamiriro, chero chiratidzo chekuisa chinofanira kushandiswa kanenge pakarepo. Hazvishamise kuti iwe une zvakawanda zvekuwana mune yega yega mashandiro. Asi kuchengetedza kufamba kubva mukukanganisa kusingaite mumisika yemari. Nekuti kuderera kwayo kwakamirawo chaizvo, sezvakamboitika mumakore achangopfuura. Nekuwa kwegore negore kweanopfuura makumi maviri muzana mune mamwe emabhegi aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Inguva yekudyara mumisika irikubuda?
Model 037, gwaro iri nderei?